Kia လုပ်ငန်းသုံးယဉ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Star Van2(1)
Bongo III (7)
Zhong Tong (10)
Compass Express Bus (2)
Navigator Express Bus (7)
Changan Clark Daihatsu Hino Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Mazda Mitsubishi Nissan Subaru Suzuki Toyoace Toyota Zhong Tong
Kia Kia Kia Bongo Kia Bongo III
2004 Kia Bongo III
2005 Kia Bongo III 7E/
Kia Bongo III Truck 2005
Good Service Auto
Pearl White Kia Bongo III Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Cassette Radio. ဖော်ပြပါကားသည် ဆီစားသက်သာစေနို...
Kia Bongo Truck 2005
Aung Thein Than Services & Agency Limited
Blue Kia Bongo Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
Pearl white Kia Bongo Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenge...
N Car Motor Mandalay
White Kia Bongo III 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
Kia Bongo III 2006
White Kia Bongo III 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
White Kia Bongo III 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
ကီရာ လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် များ
ကီရာဟာ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ အခြေဆိုက် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ နောင်းပိုင်း မြန်မာပြည် နိုင်ငံကို ဂျပန် လေလံ ကားများ တရားဝင် တင်သွင်းခွင့် ပေးတဲ့ အခါမှ ဂျပန် ပြည် ကို ရောက်နေတဲ့ ကီရာ နဲ့ ဟွန်ဒေ ကားများကို မြန်မာပြည်သို့ တင်သွင်း လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုက လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလွန်း နဲ့ အက်စ်ယူဗီ ဇိမ်ခံ ကား များ ကိုတော့ တောင်ကိုရီယား ကနေ အသစ် များ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က တရားဝင် ကီရာ အရောင်း စင်တာ မှာ လည်း ရောင်းချ ပေး နေ ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည် မှာ အများစု ဝယ်ဖြစ် နေကြတဲ့ ကီရာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ ကို ရွေးချယ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က လူသုံးများ ကီရာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များ
ကီရာ ထဲမှာ အများစု မြင်ကြ သုံးနေကြ ဝယ်နေကြ တာ ကတော့ ကီရာ ဘွန်ဂို လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အလတ်စား လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၂၉၀၀ စီစီ ရှိပြီး ဆလင်ဒါ ၆ လုံးပူး V အင်ဂျင် ကိုပဲ အသုံးပြုထား ပါတယ်။ နောက်မှာ ကုန်ပစ္စည်း တင်ဖို့ အတွက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ အခန်း ပါဝင် တာကို လည်း မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေကမှာလည်း ၃ ဦး ထုင်နိုင် ပါတယ်။ တန်ချိန် အားဖြင့် ၅ တန် ဝန်းကျင် ရှိတဲ့ကား ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှာ လေးထောင့် သတ္တာဗုံး တင်လို့ ရလို၊ အမိုးပွင့် နောက်တွဲ လည်း တင်ကြ ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ နေရာ ကတော့ မြို့တွင်း နဲ့ နယ်ခရီး ကုန်စည် တင်ပို့ ရေး တို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ် လောင်စာဆီ အမျိုး အစား ကို အသုံးပြုတဲ့ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမည် အပြည့် အစုံ အား ဖြင့် Kia Bongo III လို့ ပေးထား ပါတယ်။ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မော်ဒယ် များ လောက် ကို သိန်း ၁၁၀ ဝန်း ကျင် လောက် ပေါက်ဈေး ရှိပါတယ်။
ကီရာ ထဲမှာ လုပ်ငန်းသုံး ကုန်တင် ကား အပြင် ခရီးသည် တင်တဲ့ ဘတ်စ်ကား များလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ သူ့ကို လည်း မစ်ဆူဘီရှီ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အမျိုး အစား ထဲမှာ ထည့်သွင်း စဉ်းစား နိုင်ပါတယ်။ ခရီးသည် ၂၅ ဦးစာ ကနေ အစားစား အမျိုးမျိုး ရှိ ပါတယ်။ ကီရာ ကနေ ဘွန်ဂို အပြင် အခြားသော အရွယ် ငယ် နဲ့ အရွယ် ကြီး ကုန်တင် ယာဉ် များလည်း ဝင်ရောက် ပါ သေး တယ်။
ကီရာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် နှင့် မြန်မာပြည် ဈေးကွက်
ကီရာ ဟာ မြန်မာပြည် ကိုယ်စား လှယ် လုပ်ငန်း တစ်ခု နဲ့ ပူးပေါင်း လို့ မော်တော်ယာဉ် တွေကို တင်သွင်း ဖြန့်ချိ ရောင်းချ နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ရရှိ နိုင်တဲ့ ကားက ဆလွန်း နဲ့ အက်စ်ယူဗီ အမျိုး အစား နှစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ဇိမ်ခံ ကားတွေ ပါ။ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အတွက် ကျတော့ အများအား ဖြင့် ဂျပန် တစ်ပတ်ရစ် ကား လေလံ ဈေးကွက် ကိုသာ မှီခို နေကြ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း သုံး ဖို့ အတွက် လည်း ကီရာကို အသစ် မှာ ဖို့ အတွက် လည်း ဝယ်သူ သိပ် မရှိသေး ပါဘူး။ ဝယ်သူ များက အဟောင်း ကိုသာ ဈေး သက်သက် သာသာ နဲ့ လိုချင် နေဆဲ ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ Motors.com.mm ကနေလည်း ကီရာ တစ်ပတ်ရစ် နဲ့ အသစ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင် ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Kia မော်ဒယ်
ထိပ်ဆုံး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
Zhong Tong Navigator Express Bus